Mawiricheya eMS Varwere - Multiple Sclerosis
Kupesana nemamiriro ezvinhu nekukasira kuremara panotarisirwa kuvandudzwa, kufamba aids ane chirevo chakasiyana zvakanyanya kana iwe uchifunga chisingaperi kuenderera kwechirwere. Izvo zvakaoma kukurudzira mhando ye wiricheya kushandisa kune vanorwara veMS.
Vanotambura vane hosha dzinokonzera kwavo kuremara zvinowedzera kuwedzera zvishoma nezvishoma sezvavanokwegura vasingadi kushandisa kufamba zvinobatsira. Ivo vanofunga nezvayo seisina simba uye kuti vasvika padanho rekusadzoka uye uku ndiko kunzwa kune vazhinji vanorwara neMS.
Chiremba anotsigira anogona kubatsira zvikuru kuona kana murwere akasimba zvakakwana kuti aite mabasa avo ezuva nezuva achifamba. kushandisa zvimiti zviviri semubatsiri wekufamba zvinofanirwa kubatsira murwere kuti ave anofamba zvakanyanya pasina kubvarura simba ravo.
Ramba uchifunga kuti murwere haakwanise kutakura chero chinhu kana maoko ake akabatikana netsvimbo dzekufamba asi a wiricheya inochengeta maoko ese ari maviri akasununguka.
Varwere veMS vanoda mavhiripu izvo zvisingaremi, zvinofambika uye zvakapetwa. Kufambisa iyo wiricheya nemaoko kazhinji ndiyo chete nzira yekusimudzira kutenderera mumurwere.
Kana magetsi wiricheya yakatemwa, zvakakosha kuti uite maekisesaizi enguva dzose, kunyanya akamira. Iyo yakanaka modhi inogamuchira zvese zvinodiwa. Scooter yemagetsi iri nyore kutenderera iri imwe sarudzo.
Iko kudzikama kweturu remurwere ndiko kunoona kukwirira kweshure. Iyo yekumusoro yekumashure inofanirwa kusimbiswa kuti igone zvinodiwa nemushandisi. Bhodhi rinodzika rinogona kushandiswa kuita izvi mumamiriro akaipisisa.
Kupokana nekuwedzera khushi inogona kubatsira panzvimbo yepelvic muzasi ezasi. Asi mutsamiro wacho haufanire kusundira mushandisi kumberi kana ivo vanofanirwa kugara vachigadzirisa nzvimbo yavo yekugara. Kana zvichidikanwa backrest inofanirwa kudzikisirwa kumashure zvishoma.
Iyo armrest inoda kuve inokwenenzverwa uye inogona kutsauka. Ruoko rwechigaro rwakakwirisa kana kuderera runogona kukonzeresa mamiriro akashata uye matambudziko epafudzi.
Kugara kwakasununguka kunokonzeresa makumbo kumanikidzwa pamwechete (kupinza). Aya mamiriro anogona kudzivirirwa nekushandisa yakakosha chigaro pamutsago kana bhodhi rinobviswa. Kungoisa wedge khushi pachigaro hakuna kukwana kurwisa chezasi Musipinha nzvimbo inotambanudza spasms.
Izvi zvinogona kutungamira kune yakaipa mamiriro evakawanda veMMS vanorwara. Kushingaira kushandura mahudyu pamwe chete nemaitiro asina kubatsirwa ndiyo chete mhinduro inoshanda.
The wiricheya Inofanirwa kunge iine zvigaro zvetsoka, izvo zvinogona kubviswa nyore nyore kana kupetwa parutivi kana uchichinjisa murwere. Footrests inodzora kukuvara uku uchidzikisa contractions uye kuwedzera extensor spasms.
Dzimwe nguva rutsigiro rwakakura rwakakomberedzwa rwemhuru runogona kushandiswa pakubata kwechibvumirano uye / kana decubitus zvichikonzerwa netambo yemhuru.